सभामुख चयनमा सकस – Chitwan Post
सभामुख चयनमा सकस
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, पुस २९, २०७६
संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि यौन दुव्यवहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएपछि साढे तीन महिनादेखि सभामुख पद रिक्त छ । सभामुख वा उपसभामुख एउटा छाड्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नेकपाले सभामुख पदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । एकातिर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई अकारण पद छाड्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतिर नेकपाले सभामुख पदको उमेदवार तोक्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक पटकपटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । संसद् अधिवेशन सुरू भएको तीन सातासम्म पनि सभामुखको उमेदवार चयन हुन नसकेपछि माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यतिखेर सभामुखको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र खेमाबन्दी र दाउपेच चलिरहेको छ । कुनै दलविशेषको विवादका कारण जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च र सार्वभौम संस्था बन्धक बन्नु कुनै मानेमा उचित मान्न सकिँदैन । मानिलिऊँ, यतिखेर विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध भएको भए कति होहल्ला हुने थियो ? यसको अनुभव विगतमा भएकै हो । प्रतिनिधिसभा सरकार वा विपक्षीको मात्रै होइन, यो सार्वभौम जनप्रतिनिधिको साझा संस्था हो । आफ्नो आन्तरिक विवाद वा कमजोरीका कारणले संसद्लाई बन्धक बनाइनु लज्जास्पद र सर्वोच्च संस्थाको गरिमाको उपहास पनि हो ।
सभामुख निर्वाचन गर्न पाउनु संसद्को अधिकारक्षेत्रको कुरा हो । यसमा उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नु÷नगर्नुसँग सरोकार राख्दैन । पहिले सभामुखको उमेदवार छनोट हुन सकेको खण्डमा मात्रै उपसभामुखको अवरोधको विषय कारक बन्न सक्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तद्र्वन्द्व ढाकछोप गर्दै संसद् अवरूद्ध गर्नु कुनै मानेमा जायज मान्न सकिँदैन । सरकारले प्रतिनिधिसभा अवरूद्ध गरेर संसद्को अधिकार कुण्ठित गरेको छ । संसद्को गरिमामय पदमा रहँदै आएकी उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले आफू सभामुख बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक थिएन, होइन । यसमा उनको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सभामुख पद रिक्त गराएर त्यसमा फड्को मार्ने चाहना पनि उनले राखेकी होइनन् । संसदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेर राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति पनि उनको होइन । यसमा कुनै महाभियोग लगाउने बहाना पनि छैन भने उपसभामुखले अकारण आफू पदमुक्त किन हुने ? सभामुख सत्तारुढ दल नेकपाले नै लिँदा पनि त्यसमा उनले दाबी गर्न किन नहुने ? यसमा सरासर उनीमाथि अन्याय हुन गएको छ । उनी पार्टीको नीतिविरूद्ध पनि जान नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाइनु जनताको नजरमा बेइमानी हो ।
संसद्मा सजिलो बहुमत भएको दलले सभामुख चयन गर्न सकस पर्नुको खास कारण कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद हुनु हो । नेकपा स्थायी समितिको बैठकले सभामुख चयनको विषय छलफल नै नगरी सचिवालयमा पठाएको थियो भने सचिवालयले पनि सभामुख चयनको विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिए पनि दुवै अध्यक्षबीच पटकपटक छलफल चले पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । पुस ४ गतेयता पटकपटक संसद््को बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । नेकपा सचिवालयले दुईपटकसम्म उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ । यद्यपि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कोटामा उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाम्फे यतिखेर नेकपाका नेताका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेकी छन् । पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर भागबन्डाको खेल हुनु राम्रो होइन । तर, पूर्वपार्टीकै खेमाहरुबीच सभामुख बन्ने होडबाजीले संसद् नै अवरूद्ध हुन पुग्यो । नेकपाको आन्तरिक गुटबन्दी या खेमा जेजस्तो भए पनि सभामुख चयन प्रक्रियाका लागि संसद् बन्धक बनाइनु नेताहरुको अक्षमता हो । यसले नेकपाभित्रको द्वन्द्व प्रकटीकरण गरेको छ । सभामुख चयनमा ढिलाइ हुँदा संसद् र जनता दुवै अनिर्णयको बन्दी बन्छन् भन्ने वास्तविकता पनि नेताहरुले बुझ्नु जरूरी छ ।
सहिद बलराम दुग्ध उत्पादकको साधारण सभा
नेपाल गणित समाजको विरोध